MAGACYO: Xubnaha Guddiga Farsamada dhismaha Galmudug ee doorashada oo lagu dhawaaqay & Xaaf oo lahadlay.
MUQDISHO(P-TIMES) – Wasaaradda Arrimaha gudaha, Federaalka iyo Dibu heshiisiinta dawladda Soomaaliya ayaa xalay saqdii dhexe magacowday guddiga Farsamada ee xulida iyo ansixinta baarlamaanka cusub ee Galmudug, waxaana tiradda xubnaha guddigan laga dhigay 12 xubnoo ay ku jiraan qaar kamid ah saaxiibada dhaw ee dhinacyada ku loolamaya xaaladda Galmudug.
Wasaaradda Arrimaha gudaha ayaa shaacinta Liiskan, waxay sheegtay in ay wada hadal kala yeesheen oo ay u dhan yihiin dhinacyada Galmudugtii hore & Ahlu Suna Waljameeca, waxayna sheegeen inay ka shaqeyn doonaan howlihii ay u xilsaarteen odayaasha dhaqanka.
Dad badan ayaa ka walaacsan sharcinimada iyo dhexdhexaadnimada guddigan oo ay maalmihii u dambeeyey magacaabistiisa isku hayeen Xukuumadda Faderaalka, Madaxweynaha wali xilka haya ee Galmudug, Siyaasiinta mucaaradsan dawladda ee kasoo jeeda gobalkaas iyo Ahlu Suna Waljameeca.
Xubnaha guddigan oo ka kooban 12 xubnood ayaa kala ah.
Cabdulqaadir Nuur Caraale
Xuseen Cabdille Xassan
Cabdirisaaq Aaden Warsame
Abshir Cabdiraxmaan Maxamed.
Madaxweynaha Galmudug ee xilku ka dhamaaday Axmed Ducaale Xaaf oo soo saaray wareegto ayaa muujiyey sida ugu qanacsan yahay guddigan, wuxuuna sheegay in ay muhiim tahay in wadajir loola shaqeeyo si’i loosoo gabagabeeyo dhismaha Galmudug cusub.
Xaaf ayaa wareegtadiisa wuxuu markale ku cadeeyey in ay wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka kala shaqeyn doonaan howlaha dibu dhiska Galmudug, waxaana ay ahayd taasi mid uu horey u sheegay in ay ka laabteen.
Mucaaradka ayaa la sugayaa jawaabtooda, gaar ahaana musharaxiinta Madaxweyne-nimada oo qaarkood saluugsan qaabka ay Xukuumadda Soomaaliya u maareynayso howlaha doorashooyinka Galmudug.